११. जलिय उपचारकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा
जलिय उपचारकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा
क) १. काठमाडौं तथा तराइका धारामा समय समयमा केमिकल र फोहोर युक्त पानी आउने हुँदा पानी भर पर्दो छैन त्यसकारण त्यहाका बसिन्दाले उमालेर फिल्टर गरेको भाँडामा भरेर राखेको फोहोर नभएको पानी प्रयोग गर्नको लागि तल पानी को सफाइ को लेख पढेर पानी प्रयोग गर्नुहोस् ।
२. स्टिल र प्लाष्टिकको भाँडा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । आफैंले हेरेर सफा भाँडामा दुध र मिश्रण पानी उमाल्नुहोस्। थर्मश र इलेक्ट्रीको तातोपानी माईक्रोओभन र कुनै पनि अप्राकृति तातोपानी
प्रयोग नगर्नुहोस् ।
३. भए गाईको, नभए भैंसीको, नभए डि।डि।सी।को मात्र शुद्ध दुध प्रयोग गर्नुहोस् । दुध जति शुद्घ र ताजा हुन्छ , त्यतिनै जलयोगले छिटो प्रभाव गर्छ ।
४. जलयोग गर्न बस्दा परिवारको सदस्यलाई भनेर बस्नुहोस् । बाथरुमको ढोकामा चुकुल नलगाउनुहोस् । योग गर्दा केही दिन ब्लड प्रेशर बढ्न सक्छ । बढेमा योगपछि २ चम्चा चिराइतो भिजाएको पानी या २ गिलास चिसोपानी पिउनुहोस् या २ चम्चा करेलाको पानी खानुहोस् । केहि दिनमा प्रेशर व्यालेन्समा आएमा तितो खान जरुरी पर्दैन । प्रायः जलयोग प्रयोग कर्ताको रक्त संचार व्यालेन्समा आएको छ ।
५. फिल्टर प्रयोग गर्दा क्रमस रोग घट्दै निर्मुल हुन्छ । पानी खराब भएमा जलयोग पछी रोग केही घट्छ तर फेरी बद्छ । क्रमस शरीरको रोग घट्नु को साटो बढ्दै जान्छ । फिल्टर पानी प्रयोगकर्ता सबैको रोग निर्मुल भयो ।
६. योग गर्ने समय १ पटक मा आधा घण्टा भन्दा बढी नबस्नु होस् । शरीरको अवस्था, रोगको अवस्था अनुसार रोगी ले जलयोग प्रयोग गर्नु पर्छ । (एक्जर्शन पनि हन्छ ) कमजोरले कम समय प्रयोग गर्नुहोस । अब मालिसमा पनि जलयोगले काम गर्न सक्ने भएको छ । मालिसको नियम पछाडी लेख हेर्नु होला ।
ख) जलयोग गर्दा शरिरमा देखिने लक्षणहरु
जलयोग गरेर उठ्दा केहि रिंगटा लाग्छ, शरिर झुम्म हुन्छ । सबैरोगी लाई योग पछि एउटै लक्षण देखी दैन तर धेरै जसो रोगी लाई यस्तै लक्षण देखीन्छ । बाथरुमको आड लिंदै बिस्तारै उठ्नुहोस् । योगपछि १५–२० मिनेट बेडमा आराम गर्नुहोस् । योग सुरु गरेको ८–१० दिन सेक्दा बसेको बाथरुम, योग गर्ने मानिस, सुतेको कोठा, ज्वरो आएको जस्तो असाध्य गन्हाउँछ । पिसाब वढी लाग्छ लट्ठ निद्रा लाग्छ । मुख सुक्छ, प्यास लाग्छ । प्रसस्त पानी र झोलीला खाना खानुहोस् । शरिरको तापक्रम छाम्दा चिसो जस्तो हुन्छ । शरिरभित्रको रोगहरु ७५५ भन्दा बढी पिशावबाट तथा बाँकी पसिना, दिशाबाट आदीबाट जान्छन् । सुत्दा घुर्ने बानी भए – योग सुरु गरेकै दिन देखि कम हुदै जान्छ । विकार
गैसकेपछि शरिरका सबै नराम्रो लक्षणहरु हराउँदै जान्छन् । शरिरको रोग अनुरुप निको हुने समयमा विभिन्न शारीरिक लक्षण देखिन्छन् । दिशा कब्जियत पनि हुनसक्छ । बढी दिशा लागे औषधि र पानी बढि खानुहोस् । योग गरेको पहिलो हप्ता निकै रोग घट्छ, तर त्यसपछि रोग घट्ने क्रममा स्थीर हुन्छ या केहि रोग बढ्छ । पूरानो रोग र नशामा धेरै फोहोर जमेको भए यस्तो लक्षण देखिन्छ या खराब पानीले जलिय योग गरेमा यस्तो हुन्छ । नियमित योग गर्नुहोस्, कम हुन्छ । नशा भित्र जमेका खराव तत्व जलिय योग ले पगालेर फ्याकी सकेपछि नशा पूर्ण रुपमा रगत प्रवाह गर्ने नर्मल अवस्थामा आई नशा खुल्छ । नशा खुलेपछि निको हुन्छ
दीर्घरोगीको रोग निको हुन केहि समय लाग्छ । योग शुरु गरेको १५ दिन देखी आफ्नो विषयमा थाहाहुन्छ । योग प्रयोगकर्ताले आफैं थाहा पाईन्छ । कति रोग घयो भनेर् योगपछि शरिरमा हरेक परिवर्तन देखिन्छन् । पेट दुख्ने, कराउने, पोल्ने, पातलो दिशा लाग्ने, वाक्क आउने, खानमन नलाग्ने, कमजोर हुने हुनसक्छ । कुनै शरिरका रोग लागेका भाग सुरुमा दुख्छन् । कुनै हल्लिन्छन्, पाठेघर हल्लीन्छ कुनै पोल्छन्, कुनै चर्किन्छन, पेटका अङ्गहरु खुकुलो र गुप्ताङ्ग वाट झरे केहि भएको जस्तो हुन्छ । यस्तो हुनुको कारण आराम कम भएर हो । जलिय योगले अपे्रशन गरेर फ्याकिने हरेक विकार शरीर वाट फ्याकि विकार वसेको ठाउँ खाली गर्ने हुन्छ आराम गरी ती खाली ठाउँका घाऊ भर्नु पर्ने हुन्छ । पेट र पाठेघरका रोगीले, शरिरले मागे जति मात्र जलिय योग गरेर खाना साथै वेड रेस्ट १५ दिन गर्नु पर्छ (यो अवधीमा गाडी या पैदल बाटो बढी हिड्ने महिलाको यस्तो समस्या हुने गरेको छ ।) कुनै अङ्ग समयमा जलिय योग शरीरभत्र अप्रेशन गरेको जस्तै हो ।
कुनै कुनैअंङ्ग प्रत्यक्ष पग्लिएको थाहा हुन्छ । पिशाब अड्किएको जस्तो केहि पोल्ने पिशाका रोगीमा बढि हुन्छ र पिशाब पहेंलो, बाक्लो, असाध्य गन्हाउने हुन्छ । पिशाबको गन्ध फरक फरक आउँछ । दिशा पनि केहि फरक र पोल्ने हुन्छ । पिशाब बाहिर निस्किने बेलामा चिरिक चिरिक गर्छ । पेटको देब्रे भाग पिशाब बाहिर जाने भागमा रोप पूरै निको नभएसम्म कुट–कुट दुख्छ । पिशाब रोगीलाई यस्तो प्रायः हुन्छ । शरिर भित्रका फोहोर पिशाबको थैलीमा जम्मा भएर जाने भएर हो हरेक प्रयोगकर्तामा फरक लछण देखिन्छन । निको भईसकेपछि दुख्दैन । योगले काम गरिरहेको अंगको भागमा पहिला धुन्छ, अनि निकै दुख्छ, त्यसपछि पोल्छ, त्यसपछि पग्लिन्छ र दिशा पिसाबबाट जान्छ, यो समयमा जलिय योगले शरीर रोग अप्रेशन गरेको जस्तै हो । यो समयमा प्रशस्त झोलिलो चिज र खाना खानुहोस् । यो क्रममा कहिलेकाहिं ज्वरै आउला जस्तो भएर रोग लागेको अंग दुख्छ । दुख्छ, पोल्छ, तर शरिरभरिमा कहिं रोगमा कमी आईरहन्छ । धेरै दुखेमा योग केहि दिन बिराएर गर्नुहोला । डाक्टरी सल्लाह लिएर औषधि खाएर पनि योग गर्न सकिन्छ । तातोले विगार नगर्ने शरीरलाई जलिययोगले विगार गर्दैन) योग पछि पहिला पेटका रोग हराउँछन् । दोश्रोमा कम्मरभन्दा मुनी खुट्टासम्मका रोग हराउँछन् । तेश्रोमा ढाडबाट घाँटीका पछाडि नशा हुँदै टाउकोमा काम गर्छ । टाउकोमा खराबी यदि छ भने निकै दुख्छ । दुख्ने भनेको पग्लीने ९खराब तत्व० हो । कसैलाई शरिर भरि एकैचोटी पनि दुख्छ । रोग नभएका मानिसलाई योगले केहि हुँदैन । यदि टाउकोमा खराबी छ भने टाउकोको नशा पूरै पग्लिन्छ र निकै दुख्छ । विस्तारै पग्लिने क्रम कम हुँदै जान्छ र दुखाई कम हुँदै रोग निको हुन्छ । आँखाका गेडी कहिलेकाहिं च्याप च्याप हुने, कहिले पोलेर रोग निस्किन्छ, कहिले जाली लागेको जस्तो भएर मधुरो हुन्छ । कान घुम्ने, हावा छिरेको जस्तो हुने, पोल्ने पहिला तेजसँग हुन्छ । विस्तारै कम हुँदै हुँदै सबै आँखाका रोग हराउँछन् । (यो कम टाउकोमा प्रविधीले काम गरे पछि संगै काम गर्ने गरेको छ आँखा कहिले मधुरो वादल लागे जस्तो हुन्छ आँशू हातमा च्याप–च्याप आउँछ त्यति बेला सफा पानीले धोई पखाली गर्नुहोस् । )
आँखाको पावर बढ्छ । शरिरका रोग कति चैं निर्मुल हुन्छन् । कति चैं व्यालेन्समा राख्न सकिन्छ । रोगीको शरीरीक रोग सकिएपछी फेरी रोग बल्झिन नदिन हफ्ता को २ पटक ३, ३ दिन फरक पारी जलयोग गर्नु पर्ने साथै गुप्ताङ्गको सफाइ नियम पुर्वक गर्नुहोस् ।
जलिय योगको पानी र प्रयोगका सामान खराब भएमा रोग बढ्छ । रोग सकिएपछि जलयोग गर्दा पोल्छ र गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि योग बन्द गर्नुहोस्, आफ्नो शरिरले खोजे जति मात्र जलीय योग प्रयोग गर्नुहोस् । फेरी रोग बढेको जस्तो भएमा मात्र जलिय योग गरे पनि पूग्छ ।
ग) गुप्ताङ्गको सफाई
१. पिशाव फेरी सकेपछि उमालेर फिल्टर गरेको पानी दुई प्रशर भए पुग्छ । सफा पानीले चिप्लो पदार्थ नगएसम्म मिची मिची धोएर ट्वाईलेट पेपरले योनी (लिङ्ग) पुछेर ओभानो पार्नुहोस् ।
२. गुप्ताङ्गको छेउछाउ टाइट कपडा, फोहोर, गन्ध, केमिकलयुक्त सावुन सर्फ जस्ता पदार्थ प्रयोग नगर्नुहोस् । फोहर ट्वाईलेट केमिकल युक्त कमोट माथी दिशा पिसाब नगरौं ।
त्यसमा भएको ग्याँस गुप्ताङ्गको माध्यमबाट शरिर भित्र तान्छ ।
३. गुप्ताङ्गमा हावा जरुरी छ । खुला कपडा प्रयोग गर्नुहोस् ।
४. महिला महिनावारी भएको समयमा प्याड छिटो छिटो फेर्नुहोस् । चिसो र भिजेको कपडाबाट योनी जोगाउनुहोस् । योनी सधैं सफा र ओभानो राख्नुहोस् । पिसाब चुहिने रोग भए पिसाबले भिजेको चिसो कपडा धोएर मात्र प्रयोग गर्नुस् ।
५. कट्टु (पेन्टी) टाईट नलगाउनुहोस् । ९महिला० जरुरी मात्र लुज र सिल्कको पेन्टी लगाउनुहोस् । जो छालामा कम टासिन्छ ।
६. सम्भोग गरीसकेपछि टुक्रुक्क बसेर योनी (गुप्ताङ्ग) धोएर ट्वाईलेट पेपरले पुछेर ओभानो पार्नुहोस् ।
७. नुहाई सके पछी दिशा, पिशाब धोई सके पछी २ पसर फिल्टर गरेको पानीले गुप्ताङ्ग र मलद्धार पखालेर पुछ्नुहोस् । शेष गरेर पिसाब इन्फेक्शन हुनेले ।
८. महिलाहरुको बढ्दो उमेर संम्भोग,बच्चा जन्म दिंदा वा अन्य कारणवश महिलाको गुप्ताङ्गको भित्री मक्शल केही मात्रामा फाँटेर गुप्ताङ्ग खुकुलो र कमजोर भई प्रायः पिसाब र पाठेघर लगायत अन्य रोग लाग्नबाट छुटकारा मिल्छ । योनीको स्वरुप शरिरको पूर्व अवस्थामा राख्न सकिन्छ ।